Haweenka dibadaha laga keensado ee caawinta weydiista Kvinnojourer oo soo batey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haweenka dibadaha laga keensado ee caawinta weydiista Kvinnojourer oo soo batey
La daabacay måndag 15 april 2013 kl 14.00
Ku dhawaad 500 oo haween dibadaha ka soo jeeda ah ayaa sannad kasta caawinaad u doonta xarumaha haweenka la garaaco lagu qariyo ee Kvinnojourer kadib markii ay garaacis u geysteen ragii dalka keenay, sida ay warisey laanta Ekot. Balse sida sharciga dhigayo hawenkaan ayey tahay in sharciga deganaansha rasm8igaa la siiyo hadii ay dhibaato kalo kulmaan ragooda, laakiin saas oo ay tahay haweenkaan sharci degenaansho la siiyo ayaa aad u yar.
Ruuxa dalka lagu keeno laame ahaan waxaa la siiyaa sharci deganaanshu oo ku meel gaar ah labada sanno ee hore. Sharciga degaanaansha rasmiga ah ayaa ruuxa la siiyaa hadii uu lamaanahiisa la noolaado wax ka badan labo sanno, balse hadii ay xilligaas ka hor kalo tagaan waxuu qaanuunka dhigayaa in ruuxa dalka laga masaafuriyo.
Laakiin waxaa jira ka reebitaan xeerkaan labada sanno, ka rebitaankaas oo ah hadii ruuxa dalka la keenay uu lamaanahiisa u geysto falgabood garaacis markaas waxey tahay in ruuxaas la siiyo sharciga deganaansha rasmiga ah, xeerkaan oo ah mid loogu talo galey in lagu difaaco dadyowgan noocaan ah. Laakiin laga soo bilaabo 2011 waxaa deganaanshaha rasmigaa la siiyey 81 qof keliya oo kamid ahaa 150 qof dhibaatooyinka noocaan oo kale ah loo geystey.
Xarumaha Kvinnojourer ayaa sharcigaan dhaleeceysan madaama sharuudaha xeerkaan yahay mid adag oo oranaya in ruuxa uu ugu yaraan la noolaan laamaanka dhibaateeyey ugu yaraan afar bilood si uu uga mid noqdo xeerkaan badbaada laagu talo galey. Ururada Kvinoojourer ayaa sharuudaas ku tilmaameyn mid bini'aadnimada ka baxsan.